Imanyuwali Yomsebenzisi weHaylou GT2 - Izincwadi +
Incwajana Yomsebenzisi YeHaylou GT2
Posted byfazlul October 24, 2020 December 4, 2020 Shiya amazwana kwiManyuwali Yomsebenzisi weHaylou GT2
Ikhaya » UHaylou » Incwajana Yomsebenzisi YeHaylou GT2
Ama-Earphone we-TWS BT
Imodeli: Haylou GT2
2 Yini eseBhokisini
3 Ungagqoka Kanjani
4 Ungashaja Kanjani
5 Ukuvula amandla
6 Ukucisha ugesi
7 Imodi yestiriyo
8 Imodi yeMono
9 Shaja Icala
11 Ifektri yesondlo yansuku zonke
13 Ukusetha Kwefektri
14 Okukhipha umsindo kuphela kusuka ku-earbud eyodwa
15 Ezinye izinkinga ngokushaja
16 Ama-Aftersales nokuxhaswa
16.1 Izincwadi Ezihlobene
Ama-eartips * ngazimbili (kufakwe ama-eartips osayizi aphakathi nendawo), ama-earbuds, ikesi lokushaja, ikhebuli yokushaja, ibhukwana lomsebenzisi.
Amapharamitha ayisisekelo (ama-earbuds)
Ibanga lokusebenza: 10m (isikhala esivulekile ngaphandle kwesithiyo)
Umthamo webhethri: 43mAh (i-earbud eyodwa)
Isikhathi sokushaja: approx. 2 amahora
Isikhathi sokukhuluma: approx. 3.5hr
Isikhathi sokulinda: cishe. 150hr
Ipharamitha yokufaka: 5V 100mA
Uhlobo lwebhethri: li-ion
Inguqulo ye-Bluetooth: v5.0
Amapharamitha ayisisekelo (ikesi lokushaja)
Ipharamitha yokufaka: 5V 500mA
Lokukhipha ipharamitha: 5V 150mA
Isikhathi sokulinda: cishe. 4 izinyanga
umthamo webhethri: 380mAh
Sicela ulungise iMic emlonyeni wakho ukuze uthole isipiliyoni esingcono sokushaya.
Ukusetshenziswa okokuqala ngqa, sicela ususe izitika kuleli cala bese uphakamisa izindlebe.
Thatha ama-earbuds kuleli cala ukuze uwavule. Uma ama-earbuds engekho kuleli cala, bamba i-MFB ye-1.5s ukuwafaka amandla (i-LED ivutha imhlophe nge-1s).
Faka ama-earbuds kuleli cala ukuze uwavimbe. Bamba i-MFB ngama-4.5s ukuyicisha. (I-LED ikhanya ibomvu ngama-2s).
Ukuxhumeka okuzenzakalelayo: thatha ama-earbuds amabili kuleli cala, azovula ngokuzenzakalela futhi abhanqane ngama-3s. Lapho i-LED ku-earbud yangakwesokudla icwayiza okumhlophe kancane, sesha iHaylou-GT2_R bese uthepha umakhalekhukhwini ukuze uxhume womabili ama-earbud nomakhalekhukhwini.
Uma ama-earbuds ehluleka ukuxhuma kumakhalekhukhwini, sicela uwavule futhi bese uphinda lezi zinyathelo ezingenhla.
Ama-Earbuds azoxhuma kabusha ngokuzenzakalela kudivayisi yokugcina kumarekhodi okuxhuma, uma akhona. (Ubuhlakani be-Bluetooth budinga ukwenziwa busebenze
Qaphela: I-GT2 isethelwe efektri ngaphambi kokuthunyelwa ngaphandle.
Ukubhangqa ngokwenza: amandla o earbuds bese uwanika amandla ngesandla. Ama-Earbuds azohlangana ngazimbili uma i-LED ku-earbud yangakwesokudla icwayiza okumhlophe kancane. Kumakhalekhukhwini, sesha i-GT2_R bese uthepha ukuxhuma omabili ama-earbud kumakhalekhukhwini.
Uxhumano oluzenzakalelayo: thatha noma i-earbud kuleli cala. I-earbud izovula ngokuzenzakalela bese i-LED izobe icwayiza okumhlophe kancane. Kumakhalekhukhwini, sesha iHaylou-GT2_R / L bese uthepha ukuxhuma i-earbud kumakhalekhukhwini.
I-Earbud izoxhuma kabusha ngokuzenzakalela kudivayisi yokugcina kumarekhodi okuxhuma, uma akhona. (Ubuhlakani beBluetooth budinga ukwenziwa busebenze).
Qaphela: kuzodla isikhathi esithe xaxa ukuthi i-earbud yangakwesobunxele iphinde ixhumane neselula.
Ukubhangqa ngokwenza: cisha ama-earbuds bese unika amandla ngesandla kunoma iyiphi i-earbud. Lapho i-LED ku-earbud icwayiza imhlophe kancane, sesha iHaylou-GT2_R / L bese uthepha kumakhalekhukhwini ukuze uxhume.
Shaja icala ngekhebula le-USB. I-LED izokhanya ngokubomvu okuqinile lapho ishaja bese ivula o kanye uma usuphakama.
Ifektri yesondlo yansuku zonke
Sicela ungagezi ngama-earbuds. Ungazigqoki ngosuku lwemvula. Ungazishiyi emshinini wokuwasha noma kwezinye izimo ezimbi kakhulu. Zihlanze ngendwangu eyomile ngemuva kokusebenzisa ekuphishekeleni impilo ende yensizakalo.
Sicela ushaje umkhiqizo, uma kungenzeka ungasetshenziswanga ngaphezu kwamasonto amabili.
Sicela usebenzise ishaja eqinisekisiwe.
Ungafaki ama-earphone isikhathi eside ukuvikela ukuzwa kwakho.
Ungafaki ama-earphone kunoma yiziphi izimo ezinobungozi obungaba khona ngoba ukuwafaka kunganciphisa ukuqonda kwakho emhlabeni wangaphandle.
Uma ama-earphone engasebenzi kahle, sicela ubheke lezi zinyathelo ezilandelayo ukusetha kabusha ifektri: khipha ama-earbuds ecaleni. Amandla o-earphone abambe ama-MFB kuwo womabili ama-earbuds cishe ama-15s (i-LED izocwayiza ibomvu futhi imhlophe kathathu kabili). Ngemuva kwalokho, babuyisele ecaleni. Susa irekhodi lokuxhuma kumakhalekhukhwini ngaphambi kokucubungula okunye ukumatanisa (Onke amarekhodi okuxhuma ahlobene nama-earbuds azosuswa wonke).
Okukhipha umsindo kuphela kusuka ku-earbud eyodwa
Kuyicala elingandile. Sicela usethe kabusha ama-earphone, ususe irekhodi lokuxhuma kumakhalekhukhwini wakho bese uxhuma kabusha ama-earphone kumaselula wakho.
Ezinye izinkinga ngokushaja
I-LED ikhanya imhlophe ngokuqinile okomzuzu owodwa lapho ama-earbuds efakwa phezulu.
Icala leCarry ngeke likhokhise ama-earbuds, uma ibhethri layo lidonsa. Ama-LED esekhasini lokuphatha azocishwa uma icala selikhuphukile. Uma uyikhokhisa futhi, ama-LED ngeke anikeze noma yisiphi isaziso, okungasho ukuthi icala alikhokhiswa.
Ngaphambi kokusebenzisa ihedsethi, sicela ufunde imanuwali ngokucophelela bese uyigcinela izinkomba ezizayo.
Amahedsethi adinga ukukhokhiswa ngokugcwele ngaphambi kokusetshenziswa kokuqala
Uma ihedsethi ishiywa ingasetshenziswanga isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili, sicela uyilayishe ngezikhathi ezithile.
Sicela usebenzise amashaja enziwe ngumenzi ofanelekayo.
5 Uma ihedsethi ingatholwa yifoni yakho, sicela uhlole ukuthi ikumodi yokubhanqa; uma ishiywe ingaxhunyiwe isikhathi eside, ihedsethi izophuma kumodi yokumatanisa, sicela uphinde ufake imodi; iphutha lenqubo yefoni yakho livela, uyiqale kabusha uma iphutha lenqubo ye-headsetoccurs, uyiqale kabusha noma uyihlele kabusha.
Ikheli: Suite 1303,1305 no 1306,13 / F, Iphrase Phrase 2 yeGaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 Longiii Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China.
Umkhiqizi: I-Dongguan Liesheng Electronic CO., Ltd.
Izinto ezinobungozi nokuqukethwe kwazo entweni
amanothi: Sicela uhlele ukusebenzisa isikhathi ngendlela efanele njengoba ukuzwa kwakho kungalimala ngokusebenzisa ucingo isikhathi eside.
Izinyanga eziyi-12 ngemuva kokuthenga (sicela ugcine irisidi kahle)
Uma kukhona ukukhubazeka kwekhwalithi okwenzekayo ngesikhathi sewaranti, sicela uthathe irisidi bese uxhumane nomsabalalisi wakho ngensizakalo ye-aftersales.
Ukulandela amacala noma yimuphi umonakalo / ukukhubazeka okungabangelwa ukukhishwa kwekhwalithi akufakwa kuwaranti.
Noma ikuphi ukukhubazeka noma umonakalo odalwe yizinhlekelele zemvelo, amandla kagesi angajwayelekile noma amanye amaqiniso ezemvelo.
Noma ikuphi ukuqaqa, ukuguqulwa noma ukuguqulwa kwezingxenye okungagunyaziwe.
Noma imuphi umonakalo odalwe ukusetshenziswa okungafanele komkhiqizo kufaka phakathi ukumanzisa, ukonakalisa, ukuwa phansi, ukukhama noma ukuvezwa ekushiseni okungajwayelekile noma umswakama.
IHaylou-GT2-Manual-IlungiselelweI-PDF eyenziwe kahle
Incwadi Yomsebenzisi Ye-Haylou T15 TWS BT Ibhukwana Lomsebenzisi I-Haylou T15 TWS BT Earphones Ukubuka konke Yini ...
Incwajana Yomsebenzisi Ye-Haylou T17 IMODI YOKUSETSHENZISWA YOMSEBENZI WOKUSEBENZISA I-Wireless Yeqiniso: IHaylou T17 Sibutsetelo kanjani ...
Imanyuwali Yomsebenzisi we-Haylou Smartwatch IMANUWALI YOMSEBENZISI WOKUSETSHENZISWA U-Haylou Smart Wokubuka Okuningana OkuseBhokisini ...
Incwadi Yomsebenzisi YeHaylou Pro TWS Yezindlebe USER MANUAL TWS Earphones Haylou GT1 Pro Uhlolojikelele Yini eku ...
Ibhukwana Lezindlebe Le-Haylou GT1 TWS BT IHaylou-GT1 TWS BT Ama-Earphone Wokubuka Okufingqiwe Wokubhala Icala Okuku ...
Incwadi Yomsebenzisi Ye-Haylou GT1 TWS ye-Bluetooth Earbuds Izincwadi Zokusebenzisa ze-TWS BT EarphonesHaylou-GT1 Icala Lokushaja Okufingqiwe Okuse ...
Posted byfazlul October 24, 2020 December 4, 2020 Posted inUHaylouTags: GT2, UHaylou, Ama-Earphone we-TWS BT
Incwajana Yomsebenzisi Ye-Haylou T17
Ibhukwana Lomsebenzisi We-Onn Soundbar
Ibhokisi Lokusabalalisa Lomoya le-FURRION Nge-Manual Manual Manual User
3 Umhlahlandlela womsebenzisi we-Port HDR HDMI Switcher
I-Tenda 9-Port 10 / 100M Ethernet Desktop Shintsha Imiyalo
Umhlahlandlela Womsebenzisi we-D-Link AC1300 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Router
Imanuwali Yomsebenzisi weConbro Mini WiFi Dash Cam
ISupremo LM on Incwadi ye-JBL Go2
UJim Enright on Imanyuwali Yokubuka I-Koretrak
UMaxine Britt on Imiyalo ye-iTech Sport Fitness Tracker (US Version)
Don on Ibhukwana le-NVK Dog Training Collar
UJonel Santos on Incwadi yeSabbat X12 Pro